Myanmar OA6: ၁၀ ရက်သာ လိုတော့လျှင် ...
Posted by Mr.Pooh @ မောင်ပွတ် at 5:07 PM
ကောင်းလိုက်တဲ့ အိုင်ဒီယာ... ဒီလိုမျိုးကြံကြံဖန်ဖန် (အကျိုးသင့်အကြောင်းသင့်)ရေးထားတာလေး တော်တော်သဘောကျတယ်။ တွေးလည်းတွေးတတ်ပါပေ့။
ဟေ့လူကြီး ခြူသစ်မပြောနဲ့ ကျွန်တော်တောင် ငိုချင်လာပြီဗျာ ကိုပွတ်က စိတ်ကူးကောင်းသလို စကားပြေလည်း စွဲငြိစရာဗျာ အစ်ကို များများရေးနိုင်ပါစေလို့ ကျွန်တော်ဆုတောင်းရမှာပဲ
လေယဉ်မပျက်ကျရင် ဘယ်လို သေမလဲ သိဘူးနော်...
သတင်းပေါက်ကြားသွားပြီ လေယာဉ်တင်သင်္ဘောဆီ ရောက်မလာအောင်ပစ်ချမယ်သတိသာထား ဟားဟား
ဂွဒ်ဗျာ။ ဖတ်လို့ကောင်းမှကောင်း။ လမ်းမှာ လေယာဉ် ဘီး မပေါက်ပါစေနဲ့လို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဗျာ။ :D
စာကြွင်း။ ။ လေယာဉ်ပျံက ဘီးပေါက်နေတာနဲ့ အဲဒီနေ့က မတက်ဖြစ်ဖူး .... :P
chu thit said...
pls don't ever ever write this kind of story again. it really breaks my heart just imaging you're not here with me any more :(
5ရက်အလိုမှာ တဟီးဟီးတဟားဟားနဲ့ဇီးသီးနွားစား လာလည်တဲ့အပေါင်းအသင်းထဲမှာ ငါပါရဲ့လား
အင်း အဲဂလိုတကယ်သာဆို အပြောင်အနောက်လုပ်နိုင်ပါ့မလားမသိ အိအိ နိုချင်လာပီ
အော် ကြိုတော့ပြောထားမယ် နာက သရဲကြောက်ဘူးကွ ငှက်ငှက်
မောင်ပွတ်ရေ.. ခြူသစ်မပြောနဲ့... အမတောင် ဖတ်ပြီး မျက်ရည်ဝဲချင်လာတဲ့အထိ ။ အချိတ်အဆက် မိပြီး တကယ်ဆွဲသွားနိုင်တဲ့ စိတ်ကူးယဉ်အရေးအသားပဲ ။
hat kg, it's nice man! very good idea..